तपाईको भाग्यमा सरकारी जागिर छ कि छैन ? यसरी थाहा पाउनुहाेस्
25 Feb 2020 | मंगलबार, १३ फागुन, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
सोमबार, २ आषाढ, २०७६
एजेन्सी । ज्योतिष शास्त्रको अनुसार हाम्रो हातमा यस्तो रेखा हुन्छ जसले सरकारी नोकरीको संकेत गर्ने गर्दछ । यी रेखालाई पढेर तपाई आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई सरकारी नोकरी मिल्छ कि मिल्दैन ।
जान्नुहोस् यस्ता रेखाहरु बताउँछन् तपाईलाई सरकारी नोकरी मिल्छ कि मिल्दैन ।
हाम्रो हत्केलामा धेरै प्रकारका पर्वत हुन्छन् । त्यसमा गुरु पर्वत, शनि पर्वत र सूर्य पर्वत । जसले सरकारी नोकरीको निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
गुरु पर्वतले दिमाग र बुद्धिको संकेत गर्दछ । यदि तपाईको हातमा गुरु पर्वत छ भने सरकारी नोकरीको सम्भावना भएको संकेत गर्छ ।
साथै गुरु पर्वतमा यदि कुनै रेखा त्रिभुज वा वर्ग आकारको छ भने यो पनि सरकारी नोकरी मिल्ने संकेत हो ।
शनि पर्वतु जीवनमा कर्म र भाग्यको निर्धारण गर्ने रेखा हो । शनि पर्वत ज्यादै उठेको छ वा भित्र धसिएको छैन र सामान्य छ भने यो पनि सरकारी नोकरीको संकेत हो ।
यदि तपाई राजनीतिको क्षेत्रमा मन्त्री वा सचिव बन्न चाहानुहुन्छ भने एकपटक आफ्नो हत्केलाको सूर्य पर्वतको जाँच गर्नुहोस् । यदि यो रेखा सीधा वा टुटेको छ भने पनि कडा मेहनत गरेपछि यो पद मिल्न सक्नेछ ।
भाग्य रेखा, जीवन रेखाको नजिकै हुन्छ । सामान्यतया यो रेखा जीवनरेखालाई छोएर शुरु भएको हुन्छ । यदि भाग्य रेखा सीधा र लामो लहराजस्तो छ भने यो सरकारी नोकरीको संकेत हो ।
फेवातालमा डुंगा पल्टिदा एक जना वेपत्ता, दुई जनाको उद्धार
पोखरा । पोखराको फेवातालमा डुंगा पल्टिँदा एक युवक बेपत्ता भएका छन् । ३ जना सवार डुंगा सोमबार पल्टिएको हो । बेपत्ता हुनेमा काठमाडौँका २५ वर्षीय सुमित लुइँटेल रहेको प्रहरीले जनाएको छ । चढेको र २ ज
सरकारविरुद्ध तीन दल मिलेर मोर्चाबन्दी गर्ने सहमति
काठमाडौँ । काँग्रेससहितको तीन दलले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने सहमति गरेका छन् । समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई लिएर नेपाली काँग्रेसले मोर्चाबन्दी गर्ने भएको छ ।
विनाशर्त कुनै विदेशी सहयोग स्वीकार गर्न हुँदैनः नेमकिपा
काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी नेपालका लागि लाभदायक नभएको बताएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप इञ्जिनीयरिङ कलेज र ख्वप कले
थाहा पाउनुहोस् अदुवाको प्रयोग कसरी गर्ने ?
एजेन्सी । अदुवाको रस पानीमा मिसाएर नियमित रुपमा पिउँदा कयौं बिमारीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । मानिसको स्वास्थ्य समस्याको लागि घरेलु उपचार विधिका रुपमा अदुवाको प्रयोग उपयोगी मानिएको छ ।
तपाईको आफ्नै कारणले कतै कलेजो त बिग्रेको छैन ?
कहिल्यै सुन्नु भएको छ डिभोर्सबारे यस्ता रोचक घटनाहरु